वि`श्व`भर इन्टरनेट २ दिन ब`न्द हुदै!!! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Science & Tech News/वि`श्व`भर इन्टरनेट २ दिन ब`न्द हुदै!!!
इन्टरनेट प्रयोग कर्ताको लागि आउने २ दिन सम`स्या पर्ने देखिएको छ । आगामी २ दिन वि`श्वभ`रको इन्टरनेट सर्भि`समा बा`धा आउन सक्ने अन्तरा`ष्ट्रीय स`ञ्चा`र माध्यामहरुले जनाएका छन् । ‘रसिया टु`डे’को रिपोर्ट`अनुसा`र मेन डोमेन सर्भर र योसँग जोडिएको नेटर्वक infastruture केहि समयको लागि ब`न्द हुने भएकोले इन्टरनेटमा समा`स्या देखिन लागेको हो ।
रिपोर्टका अनुसार ‘द कर्पो`रेसन अफ असाइ`न्ड एण्ड न`म्बर्स’ लाई यो समयमा मर्मतका कामहरु गर्नुपर्ने छ । ‘द कर्पोरेसन अफ असा`इन्ड एण्ड नम्ब`र्स’ले क्रि`प्टोग्रा`फिक की लाई बदल्न लागेको छ । जसले इंटरने`टको ए`ड्रेस बु`क वा डोमेन नेम सिस्टम (डिएनएस) लाई सुर`क्षि`त बनाउँछ ।
कम्युनि`केशन रेगुला`रिटी अथोरि`टीले भनेको छ, ‘यदि इंटरनेट प्रयोगकर्ताले नेटवर्क अपरेटर वा इंटर`नेट प्रोभा`इडरहरु यो यसको लागि तयार भएनन् भने इंटर`नेट सेवा सुचारु हुनपनि सक्छन् । जब`की उचित सिस्टर सेक्यु`रिटी एक्सटेन`सनलाई सुचारु गरेको खण्डमा भने यसको असर`बाट बचाउन सकिन्छ ।’
साइबर घटनाको बढ्दो आ`क्रम`णलाई मध्यनजर गर्दै वि`श्व`भरको इंटरनेट २ दिन यानिकी ४८ घण्टाको लागि ब`न्द गरिने ‘द कर्पोरे`सन अफ असा`इन्ड एण्ड न`म्बर्स’ले जनाएको छ । कम्युनिके`शन रेगुला`रिटी अथोरिटीका अनुसार डिएन`एसलाई सुरक्षित बनाउनको लागि वि`श्वभरको इंटरनेट सट`डाउनु हुनु जरुरी छ ।